November | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Circumstantial evidence for ICC: Intimate relation of Racist Bama Buddhist military and bigot criminal Wirathu and cohorts
November 30, 2016 drkokogyi
If you eat with the dogs, your stomach would be end up with sh*ts.
Dogs ofabred bark together.
Prominent Buddhist Monk advocates the legalisation of Prostitutes “ပြည့်တန်ဆာ”
November 30, 2016 November 30, 2016 drkokogyi
Ashin Khema Nanda
9 hrs · Mawlamyine, Myanmar
တနေ့က စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ယောက်က ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနုိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နုိုင်ငံမှာ ပြည့်တန်ဆာများကို တရားဝင်လိုင်စင်ချ ပေးသင့်မပေးသင့်ကို ဘာသာရေးရှု့ ဒေါင့်အမြင်ကနေ သိလိုပါတယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။ သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်လို့ ငြင်းခုံနေကြတာ ကြာနေပါပြီလို့လည်း ဆုိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနုိုင်ငံက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနုိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ ပြည့်တန်ဆာ များကို တရားဝင်လိုင်စင်ချမပေးသင့်ဘူးလုို့ ဆိုပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်သက်တမ်းတုန်းက အမျိုးသမီးအမတ်တယောက်က ပြည့်တန်ဆာများကို တရားဝင်လိုင်စင်ချပေးဖို့ လွှတ်တော်တင်ရာမှာ ပွက်လောရိုက်သွားတာကို သတိထားမိ လိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း မြန်မာနုိုင်ငံက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနုိုင်ငံဖြစ်တဲ့အ တွက် ပြည့်တန်ဆာများကို တရားဝင်လိုင်စင်ချမပေးသင့်ဘူးလို့ အများစုက ပြောဆုိုနေကြ တာကုိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာသာရေးရှုဒေါင့်ကနေ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြဿနာဖြေရှင်းရေး အာဆီယံ အိုလမာအဖွဲ့နှင့် အန်ဂျီအိုများ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်
နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ M-Media
နိုဗယ်ဆုရှင်တစ်ယောက်က ဂျီနိုဆိုက် အားပေး / တရားခံ တစ်ယောက် ဖြစ်လာရင်တော့ ကမ္ဘာ့သမိုင်း အကျည်းတန်သွားလိမ့်မယ်။ ဆင်ခြင်ဖို့ အချိန်မီပါသေးတယ် Adama Dieng, United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide on the situation in northern Rakhine State
ကျွန်မနိုင်ငံကို unfairly treat လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး ရှောင်ထွက်သွားလို့ ရမယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ popularity နဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဖုံးကွယ်လို့ မရဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂက ရှုတ်ချလိုက်ပြီး မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ စံနှုန်းစံထားနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
ခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂက ရှုတ်ချလိုက်ပြီး မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ စံနှုန်းစံထားနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာလည်း နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနဲ့အညီ မဆာင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြင်းထန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ရှားဖောင်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Malaysia Ruling Party Umno’s Youth and Puteri on Rohingyas: Review Myanmar’s Asean membership
Umno Youth, Puteri on Rohingyas: Review Myanmar’s Asean membership
BY AKIL YUNUS, RASHVINJEET S. BEDI, andNURBAITI HAMDAN
Accused criminals have the RIGHT TO REMAIN SILENT နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရခုိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ မစ္စတာ ကိုဖီအာနန် ၏ ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် တွေ့ဆုံခြင်း မပြုရန် ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (စစ်တွေ) မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း
Good…Accused criminals have the RIGHT TO REMAIN SILENT. Or just testify under the oath without cross examination by the prosecutor or IF they are sure of their consciousness allow the cross examinations.
မစ္စတာ ကိုဖီအာနန် နှင့် မတွေ့ဆုံရန် စစ်တွေမြို့ရှိ လူမှုရေး
စစ်တွေ၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရခုိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ
အကြံပေးကော်မရှင် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ မစ္စတာ ကိုဖီအာနန် ၏ ဒုတိယအကြိမ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် တွေ့ဆုံခြင်း မပြုရန်
ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (စစ်တွေ) မှ